ट्रफी हाम्रै हो अब टाढा छैनः कप्तान राेहित | | Neplays.com
ट्रफी हाम्रै हो अब टाढा छैनः कप्तान राेहित
सागर ढकालको तीन विकेटको मद्दतले नेपालले मेलेसियालाई सस्तैमा समेट्यो। मेलेसियाले नेपाललाई ८८ रनको लक्ष्य दिएको थियो । नेपालले सो लक्ष्य १६ ओभरमा तीन विकेटको क्षेतिमा भेट्टाएको थियो। जितपछि कप्तान राेहित भन्छन्ः
उनीहरुलाई १२०–१४० मा प्याक गर्ने हाम्रो योजना थियो । अरु टिमहरुसँग खेल्दा पनि उनीहरुले १७० को हाराहारीमा रन बनाएका थिए । उनीहरुलाई सस्तैमा आउट गर्दा लक्ष्य पछ्याउन पनि सजिलो हुन्छ सस्तैमा अलआउट गर्ने योजना थियो । कमल (सिंह ऐरी) दाई र राशिद (खान) ले राम्रो शुरुवात दिए, त्यसपछि सागर (ढकाल), कुशल (मल्ल) ले पनि राम्रो बलिङ गरे । उनीहरुलाई ८८ रनमा अलआउट गर्न पनि सफल भयौं । शुरुमा ब्याटिङले केही संघर्ष गर्नु परेको थियो । त्यसपछि भीम (शार्की) र मैले खेल्यौं ।
यो प्रतियोगिता एक दम राम्रो भएको छ । आफ्नो लयमा गइरहेका छौं । शुरुमा खेल छिटो सकाउने भनेर पनि विकेट गएको हो ? रितको हकमा त्यस्तो योजना थिएन । पवनलाई चाहीँ लुज बलहरुमा आक्रमक ब्याटिङ गर्न भनेको थियौं । क्रिजमा टिकेर खेल्दा पनि १२–१४ ओभरमा खेल सकाउन सकिन्थ्यो ।
३० रनमा तीन विकेट गइसकेको थियो । यहाँदेखि २० रन बनाएर अर्को टिमलाई छोड्दा पनि फरक पर्दैन भनेर भीमलाई भनेको थिएँ । ५० रन भएपछि उसलाई अरु १० रन भनेको थिएँ । यस्तो गर्दा टार्गेट अझ नजिक आइपुग्यो । ट्रफी हाम्रै हो त ? हाहा (हाँसो) । यस्तै मेहनत ग¥यौं भने हामी जित्छौं पनि ।
कोभिड १९सँगै बाच्न सिक्नुपर्ने बेला भयो : पूर्व कप्तान खड्का
क्रिकेटमा निजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउन भूमिका खेल्छु : छुम्बी लामा